Home / blog / Leaky foset? Ọrịa nchara? Mmiri ahụ ọ Na-ebelata Ngwa? Aka Na Otu esi edozi ya
2020 / 10 / 21 nhazi ọkwablog 2046 0
Xiaoxin athlọ Bathroom Isi
Gịnị Banyere Okpomoku Mkpọrọ?
Igwe mmiri na-arụ ọrụ ụbọchị 365 kwa afọ, ọkachasị nke na-eji mmiri ọkụ mgbe niile, ga-emerịrị ya na limescale. Ka oge na-aga, mmiri ahụ na-esi n’olulu ahụ na-adị obere ma na-adịwanye ntakịrị, nke na-emetụta nnọọ ahụmahụ nke iji ọkpọ mmiri ahụ eme ihe.
Naanị jiri bọl na-acha uhie uhie, gbanye ya n'ime obere mmanya mmanya na-edozi ya ma dozie ya na ọkpọkọ ihe dị ka nkeji 5.
Mgbe minit 5 gachaa, mepee pọmpụ ahụ ọzọ wee hụ, mmiri ahụ na-asọ ozugbo ghọrọ nnukwu ~.
/ Unclogging ịsa ahụ Head /
Ọtụtụ ndị enyi ụlọ na-asa mmiri anaghị ewepụta mmiri nke ọma mgbe ha jisịrị ha nwa oge. Ha enweghị ike ịnụ ụtọ nkasi obi nke ezigbo ịsa mmiri ~.
Bịa nwa obere mmanya na-acha ọcha n'ime akpa rọba ma kechie isi ịsa ahụ ihe dị ka nkeji 30. Isi mmiri saa ahụ ga-adị ka nke ọhụụ ~!
/ Ighapu Sinks /
Miri na mberede kpuchie? Echegbula onwe gị, wunye mmanya ọcha na soda n'ime nsị na nha ruru 1: 1, n'aka nke ya.
N'ihe na-erughị otu nkeji, sink ahụ nwere ike ịkwụsị ozugbo, igodo adịghị aka ruru unyi oh.
Foset Mgbanwe Lee Anya
Ikwadoro inweta mmiri /
Senti ahụ pere oke mpe ma ọ bụ ihe na-adịghị mma iji nnukwu ịwụ iji jide mmiri.
Naanị tinye obere shọvel ma ọ bụ nnukwu karama plastik n'ihu ọkpọkọ, ị nwere ike ijide mmiri n’ụzọ dị mfe ~ agaghị ehi ehi oh.
/ Mfe Wsacha Aka /
Ọ bụrụ na ọkpọkọ ọkpọkọ dị ogologo n'ụlọ, ọ gaghị adịrị gị mfe ịsa aka gị. You nwere ike idozi nsogbu a site na ịgbanwe ụrọ rọba ntakịrị ntakịrị.
Sachaa karama ochie ahụ ma belata ala.
Mgbe ahụ tinye ya na ọkpọkọ ahụ ka ị ghara ihulata mgbe ị na-akwọ aka gị! Ọ na-egbochi mmiri na-agba agba.
/ Ihe na-agbawa ihu /
Offọdụ ndị enyi anyị na-eji ihe eji agba agba ochie na ime ụlọ ịsa ahụ ha n'ụlọ, nke etinyere elu ma fesaa ahụ ha niile ma ọ bụrụ na ha akpachaghị anya. Akụziri gị aghụghọ, karama plastik nwere ike idozi nsogbu ahụ.
Nke mbu, kaa akara elu ọkara nke karama plastik wee bepụ ya na ngwaọrụ.
Ntughari: Anyị ga-ebu ụzọ kaa karama plastic ahụ. Ekem bee ya na ngwá ọrụ.
Ntughari okwu: Mara: ọnọdụ nke mgbanaka ọnụ nwere ike ịkpụ ma ọ bụ na ọ dabere, dabere na nha nke pọmpụ ahụ. Mgbe anyị gbusịrị, anyị na-eji mkpa iji wuo ọnụ ike (iji gbochie ịkpụ aka).
Na-esote, tinye ihe mkpuchi karama rọba na ọkpọkọ.
Ihe odide: Anyị na-etinye karama rọba n'elu ọkpọkọ.
Otu ọta mmiri dị mfe ga-eme ya, nke mere na mmiri na-asọba nwere ụta ụfọdụ, mgbe ịsacha ihe agaghị agbapụ, kamakwa iji chịkwaa usoro ntụgharị mmiri ~ ya.
Ntughari: Ọ bụ ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, mmiri mmiri na-agbagọ ma ọ dị mfe ịsacha ihe.
Kedụ ka I si edozi fuketụ Leaky?
Igwe mmiri na-adịghị arụ ọrụ ma na-enwekarị nsogbu ndị ọzọ karịa clogs bụ leaks. Kedu otu esi edozi ọkpọkọ leaky onwe gị?
Nke mbụ, mepee efere mkpuchi plastik dị n'elu ọkpọkọ ahụ, wee jiri ngwá ọrụ ahụ kpochapụ ihe nkedo ndị dị n'okpuru.
Ntughari ederede: I mepee ya, ị ga-ahụ na kpara. Anyị na-akwapụta ya. Ghichaa ihe mkpuchi plastik dị na ọkpọkọ ọkpọ.
Ozugbo ị tọpụsịrị kposara ndị ahụ, wepụ aka nke pọmpụ ahụ.
Transcripts: Ozugbo ọ unscrewed, anyị ga-ahụ foset ahụ apụ.
N'ikpeazụ, jiri ngwá ọrụ ahụ mee ka kposara ndị ahụ sie ike. Na-emekarị fosets ihihi n'ihi na kposara ndị rụrụ, n'ihi ya, dị nnọọ ikesiike kposara na-egbochi ntapu.
Ntughari okwu: Ọ bụrụhaala na anyị ga-ejigide ya na spana, anyị ga-aga.
Olee otú Iji hichaa foset Smartly?
/ Ifụ /
Adịla ngwa ngwa ịwụsa ketchup fọdụrụnụ, gbanye nri kwesịrị ekwesị nke ketchup smear n'akụkụ akụkụ ahụ dị nro nke pọmpụ ahụ, nọrọ ihe dị ka nkeji 5, wee jiri akwa mmiri hichaa ya, nchara ahụ na-aga ozugbo enweghị akara. .
/ Wepu Mmiri mmiri /
Bee lemon na ọkara ma jiri ya hichaa eriri mmiri ahụ. N'ihe na-erughị nkeji abụọ, ọkpọkọ ahụ dị ọcha ma na-egbuke egbuke n'otu ntabi anya.
Nke gara aga :: Ezinụlọ ndị China, Ọ bụ na ha erughị eru nkewa nke atọ? Osote: Mirrorlọ mposi ndozi, 99% nke ndị mmadụ ga-eleghara a zuru ezu